ESI LELEE IPHONE MAKA NJE - IOS - 2019
Lelee iPhone maka nje
Maka iPhone zuru oke ịrụ ọrụ, ọ dị mkpa na ọ ga-ejikọrọ na Ịntanetị mgbe nile. Taa, anyị na-atụle ọnọdụ ọjọọ na ọtụtụ ndị ọrụ nke Apple-ngwaọrụ - ekwentị ekweghị jikọọ na Wi-Fi.
Ihe mere iPhone anaghị ejikọta Wi-Fi
Ihe dị iche iche nwere ike imetụta nsogbu nke nsogbu a. Naanị mgbe a hụrụ ya n'ụzọ ziri ezi, a ga-edozi nsogbu ahụ ngwa ngwa.
Ebumnuche 1: Wi-Fi nwere nkwarụ na smartphone.
Nke mbụ, lelee ma ọ bụrụ na netwọk ikuku na-arụ ọrụ na iPhone.
Iji mee nke a, mepee ntọala ma họrọ ngalaba "Wi-Fi".
Gbaa mbọ hụ na oke "Wi-Fi" arụ ọrụ, na netwọk ikuku na-ahọrọ n'okpuru (a ga-enwe akara ego n'akụkụ ya).
Ebumnuche 2: Onye na-arụ ọrụ ntanetị
Lelee ya dị mfe: gbalịa jikọọ ngwaọrụ ọ bụla (Wi-Fi, laptọọpụ, smartphone, mbadamba, wdg) na Wi-Fi. Ọ bụrụ na ngwaọrụ niile ejikọtara na netwọk ikuku enweghị ike ịnweta Ịntanetị, ị ga-emeso ya.
Iji malite, gbalịa kachasị - reboot onye ntanetị, wee chere ruo mgbe ọ malitere. Ọ bụrụ na nke a anaghị enye aka, lelee ntọala nke router, karịsịa, usoro ezoro ezo (ọ bụ ihe amamihe dị na WPA2-PSK). Dị ka omume na-egosi, ihe a na-emetụtakarị enweghị njikọ na iPhone. Ị nwere ike ịgbanwe usoro izo ya na nchịkọta nhọrọ ahụ ebe gbanwere igodo nche ikuku.
Gụkwuo: Esi gbanwee okwuntughe na Wi-Fi rawụta
Ọ bụrụ na omume ndị a emeghị ihe, rụgharịa modem na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma weghachite ya (ọ bụrụ na ọ dị mkpa, onye na-ahụ maka Ịntanetị ga-enye data kpọmkwem maka ihe nlereanya gị). Ọ bụrụ na ngbanwe nke onye ntanetị adịghị eweta nsonaazụ, ị ga-enyo enyo maka ọdịda ngwaọrụ.
Ebumnuche nke 3: Ịdaghị ama
iPhone nwere ike na-emegiderịta onwe ya mgbe niile, na-akpata enweghị njikọ Wi-Fi.
Iji malite, gbalịa 'ichefu' netwọk nke ejiri jikọọ ama. Iji mee nke a, na ntọala nke iPhone, họrọ ngalaba "Wi-Fi".
Na nri nke aha netwọk ikuku, họrọ bọtịnụ menu, wee pịa"Echezọ netwọk a".
Reboot gị smartphone.
Gụkwuo: Otu esi Malitegharịa ekwentị
Mgbe e mepụtara iPhone ahụ, gbalịa ịbanye na netwọk Wi-Fi (ebe ọ bụ na echefuru netwọk ahụ, ị ​​ga-edeghachi paswọọdụ maka ya).
Ebumnuche 4: Mgbochi Ngwa
Maka ọrụ nkịtị nke Ịntanetị, ekwentị ga-eji obi ike nata mgbaàmà n'enweghị ndabichi. Dị ka a na-achị, ha nwere ike ịmepụta ihe dị iche iche: mkpuchi, ihe ndozi, wdg. Ya mere, ọ bụrụ na ejiji bumpers na ekwentị gị, na-ekpuchi (kachasị mmetụta metal) na ngwa ndị ọzọ yiri ya, gbalịa wepụ ha ma chọpụta arụmọrụ njikọ.
Ebumnuche 5: Ntọala netwọk ezighi ezi
Mepee nhọrọ iPhone, wee gaa "Isi ihe".
N'okpuru windo, họrọ ngalaba. "Tọgharia". Ọzọ, pịa ihe ahụ "Tọgharịa Ntọala Ntọala". Kwado mmalite usoro a.
Ebumnuche nke 6: Nwepu ngwa ngwa
Ọ bụrụ na ị chọpụtala na nsogbu ahụ dị na ekwentị (ngwaọrụ ndị ọzọ nke ọma na-ejikọta na netwọk ikuku), ị kwesịrị ịnwale igbanye iPhone. Usoro a ga-ewepu ngwa ngwa ochie site na ama gị, wee wụnye ngwa ọhụrụ kachasị ọhụrụ maka ihe nlereanya gị.
Iji mee nke a, ị ga - ejikọ eriri USB gị na kọmputa gị. Wee malite iTunes ma tinye ekwentị na DFU (ọnọdụ mberede pụrụ iche, nke eji ya na nsogbu).
Gụkwuo: Otu esi tinye iPhone n'ime ọnọdụ DFU
Mgbe ịbanye n'ime DFU, iTunes ga-achọpụta ngwaọrụ ejikọrọ ma mee ka ị mezue usoro mgbake. Gbaa usoro a. N'ihi nke a, a ga-ebudatara usoro kachasị ọhụrụ nke iOS na kọmputa, soro usoro nke iwepu ochie firmware wee soro ya. N'oge a, a na-atụ aro ka ị ghara ịkwụpụ ama si na komputa.
Ihe Mere 7: Wi-Fi modul malfunction
Ọ bụrụ na ndụmọdụ niile gara aga adịghị eweta ihe ọ bụla, smartphone ka na-ajụ ịbanye na netwọk ikuku, ọ dị mwute ikwu na enweghi ike ịkwụsị ọrụ arụmọrụ Wi-Fi. N'okwu a, ị ga-akpọtụrụ ụlọ ọrụ, ebe ọkachamara nwere ike ịchọpụta ma chọpụta ma ọ bụrụ na modul nke jikọtara na Ịntanetị enweghị ike.
Jiri nlezianya lelee ihe gbasara nke puru omume nke ihe ọ bụla ma gbaso ndụmọdụ ndị dị na isiokwu ahụ - ọ ga-abụ na ị ga-enwe ike idozi nsogbu ahụ n'onwe gị.
https://termotools.com ig.termotools.com © IOS 2019